कोसी अस्पतालले ७१ लाख भाडा उठाउन बाँकी, १९ ठेकेदार अटेरी
मुख्य पृष्ठप्रदेश १ समाचारकोसी अस्पतालले ७१ लाख भाडा उठाउन बाँकी, १९ ठेकेदार अटेरी
क्यान्टिनबाट १४ लाख उठाउन बाँकी
विराटनगर/ कोसी अस्पतालको संरचना प्रयोग गरेबापत १९ वटा ठेकेदारले भाडा तिर्न अटेर गरेका छन् । अस्पतालले ती भाडेदारबाट ७१ लाख ७४ हजारभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी छ ।
कोसी अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महेश भट्टराईका अनुसार अस्पतालमा भाडामा बसेका केही व्यवसायीले २७ महिनायता भाडा तिरेका छैनन् । अधिकांशले एक वर्षयता भाडा तिरेका छैनन् ।
व्यवस्थापनमा नयाँ नेतृत्त्व आएलगत्तै बक्यौता उठाउन सुरु गरेको उनले बताए । अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीका कारण भाडा सङ्कलन नभएको पाइएपछि तत्काल उठाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
‘२७ महिनायता भाडा सङ्कलन भएकै रहेनछ । ताकेता गरी भाडा उठान थालेका छौं,’ उनले भने, ‘भाडा नतिरेकाहरू सबैलाई एक महिनाको छुट पनि दिएका छौं ।’
भाडा बुझाउन ताकेतासहित ८ मंसिरमा पत्र काटेपछि केही भाडा बुझाउन थालेका छन् । ‘एकसाताको ताकेतासहित पत्र बुझाएका कारण २४–२५ लाख जति भाडा उठेको छ,’ उनले भने, ‘अरु भाडा उठ्नेक्रम जारी छ ।’ भाडा बुझाउन अटेर गरेकाहरूलाई ७ प्रतिशत जरिवानासहित एक साताभित्र शुल्क बुझाउन पत्र काटिएको उनले बताए ।
कसले कति भाडा तिर्न बाँकी ?
कोसी अस्पताल प्रशासनको तथ्याङ्कअनुसार भाडाबापत कोशी अस्पतालले क्यान्टिनबाट सबैभन्दा बढी रकम सङ्कलन गर्नुपर्ने छ । २०७५ असोज १ गतेबाट विनोद महतले मासिक ६१ हजार पाँचसय ५५ रुपैयाँ भाडा बुझाउनेगरी सटर भाडामा लिएका थिए । उनले १४ लाख आठ हजार तीन रुपैयाँ अस्पताललाई बुझाउन बाँकी छ ।
क्यान्टिन भाडामा लिएको दुई वर्षमा एक लाख २९ हजार २८८ रुपैयाँ बुझाएको अस्पतालको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
सरोज खनालले सटर भाडामा लिएको २७ महिनासम्म भाडा तिरेका छैनन् । उनले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ तिर्नेगरी सटर नम्बर ८/१ भाडामा लिएका थिए । अस्पताल प्रशासनका अनुसार पोखरेलले १२ लाख १३ हजार ४६० रुपैयाँ अस्पताललाई बुझाउन बाँकी छ ।
गोविन्द भगतले छ लाख ८४ हजार ८९६ रुपैयाँ भाडा बुझाएका छैनन् । उनले मासिक ७० हजार तीन सय रुपैयाँ तिर्नेगरी सटर नम्बर ९ भाडामा लिएका छन् । २०७४ कात्तिक १ गतेबाट सटर भाडामा लिएका उनले १९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ तिरेका छन् । अझै छ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बुझाएका छैनन् ।
पार्किङको भाडा पनि उठाउन बाँकी छ । पार्किङका लागि अयूव आलमलले मासिक ३१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएका थिए । २०७४ साल माघ १७ गतेदेखि ठेक्का पाएका उनले तीन वर्षको अवधिमा उनले चार लाख ३५ हजार नाै सय रुपैयाँ बुझाएका छन् । सात लाख ४० हजार १०७ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
त्यस्तै गङ्गादेवी सरदारले एक लाख २५ हजार ८० रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । उनले मासिक पाँच हजार दस रुपैयाँमा अस्पतालको सटर भाडामा लिएकी थिइन् । सुभाषकुमार राजवंशीले एक लाख १९ हजार २३६ रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी छ । उनले मासिक दस हजार पाँच रुपैयाँ बुझाउनेगरी सटर भाडामा लिएका थिए ।
डोमा मण्डलले तीन लाख ९६ हजार ४१० रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । उनले लिएको सटरको मासिक भाडा २१ हजार पाँच सय हो । तर २७ महिनामा एक लाख ९६ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ मात्र बुझाएकी छन् ।
कृष्ण पोखरेलले भाडा लिएको सटरको ५७ हजार ४६३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । मञ्जुदेवी मण्डलको नाममा भाडामा रहेको सटरबाट ६८ हजार १८६ रुपैयाँ भाडा असुल गर्न बाँकी छ ।
दीपचन्द मण्डलको नाममा रहेको सटरबाट एक लाख ५८ हजार ५४१ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । उनले मासिक १५ हजार तीन सय रुपैयाँका दरले भाडा लिएका थिए ।
दुर्गादेवी मण्डलको नाममा भाडामा लागेको सटरबापत चार लाख दस हजार ७२२ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । उनले मासिक ४० हजार चार सयका दरले सटर भाडामा लिएकी थिइन् ।
राधा धोवीले भाडामा लिएको सटरबाट दुई लाख ५० हजार १२८ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । उनले मासिक दस हजार एक रुपैयाँका दरले सटर भाडामा लिएकी छन् ।
सपरलाल राजवंशीले भाडामा लिएको सटरबाट एक लाख ७१ हजार २९३ रुपैयाँ भाडा सङ्कलन भएको छैन । शान्ति लिम्बूको नाममा रहेको सटरबाट तीन लाख १४ हजार ७५१ रुपैयाँ उठेको छैन ।
रवि मुखियाले सटर प्रयोग गरेबापत तीन लाख १८ हजार ६१३ रुपैयाँ भाडा तिरेका छैनन् । छोटु मुखियाले पनि सटर प्रयोग गरेबापत दुई लाख ४३ हजार ५८२ रुपैयाँ भाडा तिरेका छैनन् । तुलसा ओलीले सटर प्रयोग गरेबापत एक लाख ४८ हजार ४३२ रुपैयाँ तिरेकी छैनन् ।
प्रवीण सहनीले ६९ हजार ८०५ रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी छ । वसन्तराज गौतमले दुई लाख ८२ हजार २२८ रुपैयाँ अस्पताललाई बुझाउन बाँकी छ । मासिक दस हजार रुपैयाँका सटर भाडामा लिएका उनले २७ महिनाको अवधिमा भाडा तिरेका छैनन् ।
Nah tirne kasle banayo. Sab prasasan ko milemato ma hunx ra badi Judi khanxan. Chor ko desh ho Yo. Kam garne hami khane chor haru